Efa tamin’ny taona 2016 izahay, hoy ny filohan’ny DFP, Tolojanahary Maharavo na Doudou, no niantso fifampidinihana fa nodiana fanina. Ny taona 2014 ihany koa ny fianakaviambe iraisam-pirenena no efa tsy nankato io lalàmpanorenana iainana ankehitriny io. Rahampitso (TTF: Anio) ny fitondram-panjakana vao hoe hanao dinika momban’ny lalam-panorenana ao amin’ny Carlton Anosy. Tetika hanemorana ny fifidianana io aminay, hoy ity vovonana ity, entina hanodinana ny saim-bahoaka indray fa tsy raharahian’ny fanjakana ny vondrona iraisam-pirenena efa nanome 12 tapitrisa dolara hanomanana ny fifidianana. Izany rehetra izany no tsy nampirotsaka hatramin’izao ny famatsiam-bola iraisam-pirenena na dia niheboeboana fatratra aza fa hoe ho avy ny 10 miliara dolara nandritry ny fihaonamben’ny mpamatsy vola tany Parisy tamin’ny desambra 2016. Efa miova ankehitriny ny toe-draharaha satria ny mahamaika ny vahoaka dia ny hanana filoha mendrika ny safidiny ka ny DFP dia hanana kandida ho filoham-pirenena, hoy hatrany ny fanazavana.